Donald Trump, 1 sano oo Madaxtooyo ah ka dib, guulo & guuldarrooyin – Kasmo Newspaper
Donald Trump, 1 sano oo Madaxtooyo ah ka dib, guulo & guuldarrooyin
Updated - January 20, 2018 4:28 pm GMT
London (Kasmo), Donald Trump, sannadkii 2aad ee Aqalka Cad wuxuu ugu bilowday ‘Government Shutdown‘ ama xafiisyadii maamulka Federaaliga oo albaabada loo xiray, ka dib markii Congress-ku gudbin waayay miisaaniyad ku filan oo lagu wado hawlaha xukuumadda iyo Hay’adaha hoos yimaada.
Laakiin su’aashu waxay tahay, sidee ayuu, xaqiiqo ahaan, ku dhammaaday midkiisii hore?
Haddii ay dhab tahay in Madaxweyne Trump noqday nin marar badan hab-dhaqanka iyo hadalladiisa lagu soo qaatay bogagga hore ee wargaysyada, waxaa sidoo kale dhab ah in dunida ayan ka dhicin isbeddello mcjiso ah, sidii ay saadinayeen mucaaradkiisa, xilligii doorashadiisa.
Maanta oo kale, 20kii Jenaayo 2017, Donald Trump, wuxuu ololihii doorashada iyo sheekadii iyo sawirradii tirada badnaa uga sii tallaabay in uu Barlamaanka hortiisa ka jeediyo ballanqaadyo kulkulul oo horey uu u qaaday.
Laakiinse, in kasata oo habdhaqankiisu yahay Madaxwewyne buuq badan, siyaasad ahaanna khaldan, 12 bilood ka dib dareenka guud ee jira waa in hannaanka Caalamiga ah ee waayadaan, siyaasadaha 1 Madaxweyne ayan gilgili Karin xaqiiqada dalalka iyo dunida guud ahaan.
Taasina waxay ka muuqataa Maraykanka qudhiisa oo adeyga aasaaska Hay’adahu si qummaati ah isaga caabbin karaan go’aammada salfudeydka leh ee hadba mas’uulka talada haya.
Si taasi loo fahmo waxaad eegtaa oo qur ah qorshaha ‘National Security Strategy’ ee Madaxweynuhu u qaatay sida ummuuraha Qaranku u kala leeyihiin mudnaanta 1aad. Dokumentigaas Russiya waxay ku xusantahay cadaw, Shiinahana dal tartan uu kala dhexeeyo, taas oo lid ku ah kacaankii siyaasad-dhuleedka (Geopolitics) ee Trump ka ballanqaaday saaxiibkiis Vladimir Putin.
In kasta oo 1 sano ku yartahay si qiimeyn taariikhi ah loogu sameeyo Trump, durba waxaa suuragal ah in tixgalin la siiyo qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu muuqa dheer.
Guushii ugu weynayd: Suuqyada saamiga dhaqaalaha (Stock Exchange).
Wall Street wuxuu sare u kacay sannadkii u horreeyay ee Trump iyada oo saamiga S&P 500 uu kororsiimadu noqotay 23%.
Barlamaan Jamhuuriga u badan iyo Madaxweyne Jamhuuri ah oo Aqalka Cad fadhiya, Wall Street saacadihii xigay natiijadii kadiska ahayd ee doorashada waxay ku haminaysay dabacsanaan nidaamka ah iyo fududeyn dhanka canshuuraha ah.
Jabkii ugu weynaa: mashruucii Obamacare oo dhiman waayay:
Mid ka mid ah qodobbada Trump waligii aanu isku burin waa ololaha lagu burburinayo wax alle wixii uu horey u dhisay Madaxweynihii ka horreeyay, Barack Obama. Wuxuuse si guuldarroleh ugu fashilay ballanqaadkii burburinta caymiskii Caafimaadka ee lamagacbaxay ‘Obamacare’ (in kasta oo qayb ahaan lagu dhaawacay dib u habayntii maaliyadda).
Dhaxalka ugu culus: dhammaadkii hoggaankii iyo awooddii (Soft power) Maraykanka:
Hal-kudhiggii caanka ahaa ‘America First’ ee danaha Maraykanka wax kasta ka horreeyo iyo danayn la’aanta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta dimuqraadiyadda waxay fasaxeen Rejiimyadii kali-taliska ahaa ee dunida.
Waa dhammaadkii waxa loogu yeeri jiray hoggaankii damiiriga ahaa ee Maraykanka ee xarriiqay (ilaa taliskii Bush Jr) khadka casaanka ah ee ayan ka gudbi Karin dalalka dunida oo idil. Hoggaankaas oo qayb ahaan ka mid ahaa awoodda jilcan (Soft power) ee Washington aligeed ku hayatay gacan-sarreynta (Hegemony) haddase si tartiib ah uga sii lumaya.
Marka lagu daro yasitaanka dhaqannada shisheeyaha ee lagu muujiyay af-lagaaddadii u dambaysay “Why do we want all these people from ‘shithole countries’ coming here?” waxay ka fogaysay Beeshii Caalamka, faa’iidana u noqotay qowado kale sida Shiina iyo Russiya.
18kii Jenaayo Yoolbaarka Machadka Gallup wuxuu ku qiyaasay in kalsoonidii hoggaanka Maraykanku hoos u dhacday 18%, sannadkii 1aad ee Trump, halkii xilligii Obama ay ka ahayd 48%, haddana 30% .
Saaxiibkiisa ugu fiican: Ra’iisal Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu:
Isbeddelka ugu weyn Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee maamulka Trump waa ka fogaanshaha Iiraan, taas oo ka duwan rabitaankii Obama, tillaabo la mid ahna wuxuu xoojiyay xiriirkii Sacuudiga iyo gaar ahaan Israel, kaas oo qaboobaa xilligii Obama.
Ku-dhowaanta Netanyahu waxay dhex dabaalisay in Jerusalem loo aqoonsado caasimaddii Irael, jiho-beddelasho 50 sano ka dib oo la taageersanaa xalka 2da Dawladood.
Go’aankaas Washington ka xayuubiyay kaalinteedii dhexdhexaadiye-nimada Falastiin & Israel waxaa, Lobby-ga danaha Yuhuudda ka sokow, ka dambeeyay xiriirka adage e Jared Kushner, wiilka Trump soddogga u tahay iyo Benjamin Netanyahu.
Cadwgiisa ugu weyn: Xeer-ilaaliyaha gaarka ah ee Russiagate, Robert Mueller:
Ilaa hadda natiijooyin cad kama soo bixin, laakiin shaki kuma jiro in baaritaanka Mueller ee faragalintii Russiya ee doorashadii (Russiagate), uu dhib weyn ku hayo Madaxweynaha.
Baaristu waxay ku soo gadaamantay Trump iyada oo markii hore galaafatay qaar ka mid ah dadka lashaqeeya,markii dambana lugta la gashay qoyskiisa.
Waa halis aan sigi Karin Madaxtooyadiisa laakiin noqon karta mugdi intaas ka weyn haddii Xisbiga Jamhuurigu lumiyaan aqlabiyadda Congress-ka, doorashada (Mid Term) ee dhici doonta Nofember. Dimuqraadigu markaas waxay isticmaali lahaayeen baaritaanka Mueller (haddii caddeymo la taaban karo ku jiraan) si Mooshin ‘Impeachment’ ay ugu ridaan.